February 2019 – Page 11 – SHABAKADA HIIRAAN XOG
AKHRISO:- Madaxweyne Waare oo markale maacaabis sameeyay
07/02/2019 B M 0
Hiiraan Xog, Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sameeyay isku shaandheyntii labaad muddo labo todobaad gudahood, xilli ay isa soo tarayaan cadaadis uu kala kulmay Xildhibaanada Baarlamaanka. Magacaabida cusub Wasiirada, Wasiir kuxigeenada iyo Wasiiru […]
AKHRISO:- Xildhibaano xilka laga qaaday
Hiiraan Xog, Xildhibaanada Dowlad Degaanka Soomaalida ee dalkaa Itoobiya ayaa 12 xildhibaan xasaanadda kala noqday kaddib markii ay yeesheen kulan. Xildhibaanadan ayaa la sheegay inay ku tunteen xuquuqda aadanaha iyo inay geysteen falal musuq maasuq […]
DAAWO VIDEO:- Xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle oo sheegay in loogu hanjabay in la dilayo
Hiiraan Xog, Mid kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdiraxmaan Maxamed Guure”Cabdi Isbig” ayaa ugu baaqay dowlada Federalka inay soo farogeliso arrimaha siyaasadda Hirshabelle isagoo sheegay in Hirshabelle ay ku sii socoto burbur. Xildhibaan Cabdi […]
Shirka looga hadlayo Badroolka Soomaaliya oo lagu wado in uu ka furmo Dalka Ingiriiska
Hiiraan Xog, Waxaa Maanta oo ay Taariikhdu tahay 7-da February lagu wadaa in Magaalada London ee Dalka Ingiriiska uu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha Shidaalka Soomaaliya,kaasi oo ay hormuud ka tahay Dowladda Federaalka. Wasaaradda […]
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo u Safray Dalka Ingiriiska
Hiiraan Xog, Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa maanta u duulay dalka Ingiriiska oo kamid ah dalalka xariirka soo jireenka ah uu kala dhexeeyo Soomaaliya. Ra’iisul wasaare ku-xigeenka […]
Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed oo la kulmay qaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka
Hiiraan Xog, Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed ( Lafta Gareen ) ayaa Xalay kulan la qaatay qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiiru Dowlaha […]
Taliyaha Ciidanka Asluubta oo sheegay in Soomaaliya laga furi doono Xabsiga ugu casrisan Afrika
Hiiraan Xog, Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Jeneraal; Bashiir Maxamed Jaamac, ayaa sheegay in goor dhow laga hir-gelin doono Soomaaliya Xabsiga ugu casrisan Qaaradda Afrika. Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayuu ku tilmaamay mid ka mid ah Tiirarka […]
Wasaradda Caafimaadka oo la wareegtay Isbitaalada Banaadir iyo Martini
Hiiraan Xog, Dowladda Soomaaliya ayaa wadda qorshayaal ay kula wareegeyso goobo badan oo ay laheyd, islamarkaana loogu adeegi jiray Ummadda Soomaaliyeed, waxaana ka mid ah Goobihii Waxbarashada iyo qaar ka mid ah Isbitaaladii ay horey […]
Wasiirka Amniga Soomaaliya oo Guddoomiyey shir looga hadlayay Tayeeynta Hay’adaha Amniga Dalka
Hiiraan Xog, Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isloow Ducaale ayaa maanta Guddoomiyey shir looga hadlayay Tayeynta Hay’adaha Amniga heer Federaal iyo heer Dowladd Goboleed kaas oo ka dhacay Magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa […]
DAAWO VIDEO:- Xasan Sheekh Maxamuud oo cafis ka dalbaday shacabka reer Hiiraan
06/02/2019 B M 0
Hiiraan Xog, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo manta kulan la qaatay waxgaradka reer Hiiraan ayaa ka dalbaday in aay iska cafiyaan oo ay ilooban wixii aay horay uga tabanayeen. Xasan Sheekh ayaa […]